Too Nwoke igbo ibe gị afa dị nma - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ụwa / Ala Igbo / Too Nwoke igbo ibe gị afa dị nma
ndiigbokwenu1 May 6, 2016	Ala Igbo, Column, Featured Leave a comment 2,966 Views
Ị hụ nwanne gị n’ụzọ, kele ya ka ụmụigbo si ekele. Kele ya n’olu igbo, too ya afa ka ụmụigbo si eme. Kwalie ya ọtọ n’etiti ndị ọzọ ka ha maara na ọ bụ onye pụrụ iche. Ọnwere ihe kpatara ndị nna nna anyị ha ji etu onwe ha afa ma ha zute n’ụzọ. Afa mmadụ bụ ihe n’edu ya.
Onye ị kpọrọ ome ka agu, onye chi mere eze, Nwa ji ọfọ nna ya, odogwu nwoke, Nwachukwu, omelu ọra, Ezigbo nwaafọ igbo. Ọ pụọ n’ezi ọ ga-eburu afa itoro ya n’obi.
Ị kpọọ ya ome ka agu, ọ ga n’eme ka agu. Ọgaghị eme ka onye umengwu. Ọ ga na-agba mbọ. I tuo ya onye chi mere eze, ụjọ agaghị atụ ya maka na ọ ma na ebe ọ bụ onye chi mere eze ọnweghị ihe mmadụ pụrụ ime ya.
Ị tuo ya nwa ji ọfọ nna ya, ọ ga n’echeta ebeọbụla ọ nọ na ọ bụ ya bụ onye ọ dakwasiri idozi ezinụlọ ya ka ọ di nma. Ọ ga echeta na ọ bụ ya ka ọ dịịrị ịlekọta ezinụlọ na obodo nna ya nma.
Ị tuo ya Odogwu nwoke, ọ ga-adị n’uche ya na ọ kwesiri ịna’eme ka ezigbo nwaafọ igbo. Odogwu nwoke adịghị anụ akwa nwanne anaghachi azu. Odogwu nwoke adịghị anọ n’ụlọ agu-nri ana agugbu ụmụ ya na nwunye ya. Odogwu adịghị azọgbu nwoke ibe ya kama ọ bụ ya n’akwalite nwoke ibe ya.
Ị tuo ya omelu ọra, ọ ga eburu ya n’uche na ụwa ọ bịara, ọbụrọ sọọsọ isi n’aka ndị mmadụ na anara ihe ka ọ pụtara. Omelu ọra bụ onye n’enye ndị ọzọ ihe ga abara ha uru. Omelu ọra bụ onye g’eso tinye aka rụpụta ihe g’enyere ndị obodo ya aka nwee ndụ ọma. Omelu ọra bụ onye ga-asị ihe ọma rutere ya rutekwa nwanne ya.
Onye ị toro Nwachukwu ga n’echeta oge nile na ụwa nkea ọ putara ọ bụ Chukwunna bụ nna ya. Ihe ọbụla mmadụ ibe ya soro ya mee, Ọ bụ chukwu abiama ga na-echebe ya. Nwachukwu adighi atụ egwu. Nwachukwu ma na otu ọbụla ihe si dị njọ, ọ nwere nna bi n’elugigwe ọ ga-agbakwuru g’enyere ya aka.
Ihea nile n’egosi uru ito mmadụ afa baara. Ya mere ndị nna nna anyị mgbe gbuo ji etu onwe ha afa. Ọbụrụ na anyị bido mewa ka ndị nna ya si mee n’oge gara aga, ihe ga n’agara anyị mma.
Nwaafo igbo i toro afa ga-ebu ya n’uche ya na ọ bụ mmadụ pụrụ iche. Na ọnwere onye kwenyere na ọ bụ ezigbo mmadụ. Na ọnwere nị kwenyere na ọ nwere ike ịbụ onye ndị mmadụ ga na-akwanyere ugo oge nile. Ọnwere ike ịbụ onye ga-emeputa ihe ga epute agamniru n’ezinụlọ ya.
Ọkachasị taa ọtụtụ ndị mmadụ na ahapụzi ọrụ duọru ha n’obodo, ọ dị mkpa ka anyị tuo ụmụigbo aha ga n’echetara ha na onwere uru ha bara n’ụwa. Na ha bụ ụmụchukwu, ụmụigbo. Umuigbo adịghị ebi ndu ka ndị nga, ụmụigbo bụ ụmụagu. Anyị n’eme ka agu. Anyị abụrọ ndị ndị ọzọ n’agwa ka ha jesiwe ike. Kama ọbụ Anyị n’anọ n’iru n’agwa ndị ọzọ ha jesie ike.
Previous Phyno ft Olamide – Fada Fada
Next Ka anyị mụọ mkpụrụedemede igbo
Ụnyaahụ, ihe ọjọọ jọgburu onwe ya mere na Turkey. Ndị dị ka ndị ISIS tụrụ ...